Tema Morsmål - Lexin somali
Hab isticmaalka LEXIN
21. august 2014 | Somali Lexin
Waa maxay LEXIN?
LEXIN waa qaamuus ku salaysan internetka kana kooban luqadda noorwiijiga iyo luqado kale oo loogu tala galay ardayda ajnabiga ah. Boggani waxa loo kobciyaa si joogto ah. waqtigan xaadirka ahna waxa ku jiraa erayo udhaxeeya 7500 oo erey ilaa10,000 oo eray, oo u badan magacyada la isticmaalo.
Macluumadkan soo socda ee ku saabsan erayada wax ku oolka ah ayaa laga helaa LEXIN:
Sida eraygu isku badalo naxwe ahaan.
Sida ereyga loogu dhawaaqo loona qoro.
Tusaalooyin laga bixiyey macnaha iyo muhiimadda ereyga.
Mowduuc ku salaysan bogag sawirro ah oo ku turjuman luqado kala duwan.
Faalooyin naxwe ah iyo dhisme-naxweedkooda.
Maxaa loo isticmaalayaa LEXIN?
Ereygu waa udub dhexaadka barashada luqaadda. Koboca erey ee nidaamsani waxa uu fursad weyn u siiyaa ardeygu si uu u fahmo macnaha qoraalada maadiga ah iyo qoraalada kaleba. LEXIN waxa siyaabo kala duwan looga faa,iidaysan karaa barashada luqadda noorwiijiga ee sida goonida ah loogu dhigo ardeyda ajnabiga ah iyo luqadda maadiga ah ee maadooyinka loo dhigo.
Hadii uu ardaygu isticmaalo LEXIN Waxa ardeygu:
Si fudud u baran karaa erayo cusubisagoo ereyga ku xiraya musawirka ama musawirka ku xiraya ereyga, hadii ay tahay luqadda noorwiijiga ama ta soomaaligaba
Baran karaa qaababka kala duwan ee ereya loo isticmaalo.
Kor uqaadaya ama balaarinayaa barashada erayada ee afka hooyo iyo luqadaha kaleba.
In uu qoro qoraallo wanaagsan oo qoraal ah.
In uu kor u qaado xirfadiisa dhigitaalka si uu u barto sida uu u heli karo, ama isticmaali karo macluumaadka ku jira internetka.
Haddii uu macallinku isticmaalo waxa uu:
Tusi karaa ardeyda erayada maadiga ah macnahooda, sida loogu dhawaaqo iyo sida loo isticmaalo.
Usoo bandhigi karaa ardayga tusaalayn